शरीरका अनावश्यक रौँ कसरी हटाउने ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/शरीरका अनावश्यक रौँ कसरी हटाउने ?
देशका अधिकांश ब्यूटी पार्लर बन्द छन् । घरबाहिर निस्कन पनि मुस्किल छ । तर शरीरमा अनावश्यक रौं आएर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने चिन्ता नलिनुस्, ब्यूटीसियन नीरु श्रेष्ठले घरमै अनावश्यक रौं हटाउने केही उपाय दिएकी छिन् । उनको सुझाव यस्तो छः १) घरमै ट्वीजडको सहारामा अनावश्यक रौं हटाउन सकिन्छ । टुइजर्डबाट रौं हटाउनाले अधिक दुखाइ हुनेछ, छाला पनि रातो हुनेछ तर यसलाई रोक्ने उपाय पनि छ । त्यसका निम्ति, आइब्रो गर्नुअघि तल्लो सतहमा पाउडर लगाउनुहोस् र आइब्रो गरिसकेपछि मज्जाले मोइश्चराइजरले ३ देखि ५ मिनेट मसाज गर्नुहोस् ।
कपालको लागि बरदान ‘भिण्डी’, यसरी घामले डडेको छालालाई पनि पार्छ गोरो